कठोर दैवी निर्णय हो मित्रजीको अवसान « Harekpal
विनोद दाहाल March 3, 2021
मित्रसेन दाहाल सक्रियताको अर्को नाम हो । ५८ वर्षको उमेरमा उहाँको २०७७ साल फागुन ७ गते निधन भयो । यति छिटै यस्ता शब्द उहाँका लागि लेख्नुपर्ला भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ मैले । उहाँले सबैलाई झुक्याउनुभयो । दैवको निष्ठुरी घनले यसरी हान्नुभन्दा केही मिनेटअघिसम्म पनि उहाँ आफ्नौ दैनिकीमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो । केवल १०–१५ मिनेटको अवधिमै उहाँको प्राण गएको थियो । प्रजातन्त्रको सिपाही प्रजातन्त्र दिवसकै दिन यो लोकबाट बिदा हुनुभयो ।
मित्रसेनसँगको मेरो सामीप्य वरुणेश्वर माविमा पढ्दादेखिकै हो । प्रजातान्त्रिक चेतना पनि हामीमा सँगसँगै प्रदुर्भाव भएको हो । हामी नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला सदस्य । माहोल २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको बेलाको हो । त्यो सामीप्यको निरन्तरता आजपर्यन्त टुटेको थिएन । तर, उपत्यकामा झण्डै २० वर्ष म ललितपुर जिल्लामा बसेँ । त्यसैले हामी अलिक पर भयौँ भौतिक सामीप्यका कारण, मानसिक रूपमा हामी टाढा थिएनौँ सँगै थियौँ । कार्यक्रमहरूमा म यता आइरहन्थेँ । २०७१ सालदेखि म स्थायी रूपमै कपनमा बस्न थालेँ । त्यसपछि हाम्रो भेटघाट बाक्लियो ।
यसबीच उहाँको एउटा जीवनवृत्त प्रकाशित गर्ने कुरा भयो, केही दिन छलफल ग¥यौँ । तीनचार जना सम्भाव्य व्यक्तिहरूसँग कुरा भयो । सामूहिक वा एकल जसरी लेख्नुभए पनि उहाँहरूलाई जिम्मेवारी लिनका लागि आग्रह गरियो तर उहाँहरूले चाहनु भएन । मित्रसेनजीकै चाहनाअनुसार त्यो जिम्मेवारी मैले लिएँ । २०७५ सालको अन्तिमदेखि सुरु भएको उक्त कार्यले १० महिना जति पछि २०७६ सालको माघभित्र पूर्णता पायो । तर, त्यसपछि उहाँ कोटीहोमको व्यस्ततामा रहनुभयो र त्यसैबीच कोरोना महामारीमा कारण लकडाउन पनि सुरु भइहाल्यो ।
हाल कोरोना महामारी कम भएपछि पछिल्लो चरणमा केही लेखकहरू थपेर त्यसलाई पूर्णता दिने काम भयो । त्यसको नाम ‘मित्रसेन दाहाल अभिनन्दन ग्रन्थ’ राखौँ भन्दा उहाँले मान्नु भएन । नाम ‘बहुमुखी व्यक्तित्व मित्रसेन दाहाल’ राख्ने निर्णय भयो । १ सय २५ जना लेखकका लेख समेटिएको ५ सय ५० पृष्ठको ग्रन्थ उहाँले आद्योपान्त पढिसकेर उहाँको सल्लाहअनुसार मिलाउने काम पनि भइसकेको थियो । फागुन १० गतेभित्र प्रेसमा पठाउने तयारी गरिरहेका बेला ७ गते नै उहाँको निधन भयो । जुन दिन उहाँको निधन भयो, त्यस दिन पनि हामीले दिउँसो भेटेर यसैबारे केही सरसल्लाह गर्ने भनेका थियौँ ।
हाम्रो आफ्नो अधीनमा संसारका कुनै पनि कुरा छैनन् । विसंगतिवादी साहित्यकारहरूले यस्तै कुरालाई आफ्नो साहित्यका माध्यमबाट प्रकट गरिरहेको हुन्छन् । यसलाई निराशावादी चिन्तन वा विसंगतिवाद भन्ने गरिएको छ । संसारमा मानिसले अनेकौं प्रकारका वाद सिर्जना गरेका छन् चाहे राजनीतिमा होस् वा साहित्यमा वा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक क्षेत्रमा । तर, सबैको सत्य स्वीकारोक्ति के हो भने मानिसलगायतका सबै प्राणीहरू मरणशील छन् र तिनले ढिलोछिटो मृत्यु वरण गर्नै पर्छ । त्यस अर्थमा मृत्यु यथार्थ हो, शाश्वत हो तर मित्रसेन दाहालको मृत्यु अल्पायुमै भएको कुरा पनि यथार्थ हो । ईश्वरले गरेको योे निर्मम निर्णय हो ।
मोतीराम भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गोपालप्रसाद रिमाल हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, भैरव अर्यालहरू जस्ता नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरू धेरै बाँचेनन् । उहाँहरू जति बाँच्नुभयो, अरू त्यति नै उमेर मात्र बाँचेका भए काम पनि उनीहरूले गरेकोभन्दा दोब्बर गर्नेथिए होलान् । मित्रसेनजी पनि अरू १५–२० वर्ष बाँच्नुभएको भए उहाँले अरू पनि धेरै काम गर्नु हुनेथियो ।
उहाँले धेरै क्षेत्रका धेरै थरी काम गर्नुभयो– विज्ञापन व्यवसाय, मुद्रण व्यवसाय, लेखन, प्रकाशन, राजनीति र समाजसेवा । कहाँ पुग्नुभएको थिएन उहाँ ? राजनीतिमा प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको प्रत्यासी बन्नुुभयो उहाँ । राजनीतिमा विजय पराजय मात्र सफलता र असफलताको मापनको कसी होइन । निष्ठाको राजनीति यसको कसी हो । उहाँले निष्ठाको राजनीति गर्नुभयो ।
उहाँको सबैभन्दा ठूलो सफलता समाजसेवाका क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । उहाँ बढी रमाउनुभएको क्षेत्र हो यो । मानौँ उहाँले समाजसेवाबाहेक अरू कुनै काम गर्नुभएको थिएन भने पनि उहाँलाई जीवनको उचाइमा यसैले पु¥याउने थियो । उहाँले काठमाडौंको शंकरापुर लप्सेफेदीमा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि निर्माण गर्नु भएको जे.पी. प्रतिष्ठान जेष्ठनागरिक मैत्रीसेवाआश्रम सेवाको अद्वितीय नमुनाका रूपमा निर्माण भएको छ र युगौंसम्म उहाँको कीर्तिका रूपमा रहिरहनेछ ।
यस सुन्दर सिर्जनाले उहाँलाई युगौँसम्म अमर राख्नेछ । त्यस आश्रम परिसरमा उहाँको प्रतिमा स्थापना गर्ने सोच बनाएमा त्यसलाई कसैले पनि अन्यथा नमान्ला भन्ने मलाई लाग्छ । यो मेरो सुझाव मात्र हो । मित्रजीका यस्ता बहुपक्षीय क्षेत्रहरू धेरै छन्, क्रमशः हामी सबैले तिनको उजागर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । स्वर्गीय मित्रसेन दाहालको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु, साथै शोकसन्तप्त परिवारजनका हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।